साक्षात देबी माताको पाउमा छोएर दर्शन गरौ..,तपाइको मनोकामना पूरा हुनेछ ! पढ्नुस घरमा के के राख्दा फलिफाप हुन्छ – Sanjal Nepal
Homeरोचकसाक्षात देबी माताको पाउमा छोएर दर्शन गरौ..,तपाइको मनोकामना पूरा हुनेछ ! पढ्नुस घरमा के के राख्दा फलिफाप हुन्छ
November 8, 2020 admin रोचक 6882
१ लाफिङ बुद्ध कुनै पनि व्यक्तिले आर्थिक सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन् भने लाफिङ बुद्ध घरमा राद्यन सक्नुहुन्छ, यसलाई राख्दा घरको मुख्यद्धारको छड्के तिर राख्नुपर्दछ । लाफिङ बुद्धलाई चिनियाँ वास्तुशास्त्रमाबुद्धको समृद्धिका देवता रुपमा लिएको छ ।
२.तीनखुट्टे भ्यागुतो घरमा तीनखुट्टे भ्यागुतोलाई राख्नाले निकै भाग्यशाली हुने मानिएको छ । घरमा मुखमा सिक्का च्यापिरहेको तीनखुट्टे भ्याकुता मूर्ति राख्नाले भाग्यदय हुनेकुरा चिनियाँ वास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो भ्याकुताले घरको वातावरणलाई पनि सुखमय बनाइदिनेछ, तर भ्याकुतो कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहि विचार गर्नुपर्दछ, भ्याकुतालाई भान्सामा, बाथरुमभित्र र छेउछेउमा राख्नुहुदैन्, यस्ता ठाउँमा राखेमा भने दुभाग्य बढेछ । यस्तो भ्याकुतो मुख्यद्धारको छेउछाउमा राख्नुपर्दछ ।
३.तीन सिक्का धन र ऐश्वर्य एवम् समृद्धि प्राप्त गर्नको लागी घरको मुख्यद्धारमा रातो रिबनमा बाँधिएको फेंगसुईका तीन वटा सिक्का झुन्ड्याउनु पर्दछ । तर बाहिरी भागमा भने झुन्ड्याउनु हुदैन्, बाहिर झुन्ड्यएमा लक्ष्मी ढोकामा मात्र रहने शास्त्रमा उल्लेख छ । त्यसैले मुल ढोकाको भित्री भागमा झुन्ड्याउनु पर्ने छ ।
४.कछुवा कछुवा पनि घरमा राख्नाले निकै शुध र घरमा सफलता, सम्पती र खुसियाली वुद्धि हुने छ । कुछवालाई घर वा कार्यलयमा उत्तर दिशामा भित्रपट्टी फर्काएर राख्नुपर्दछ । तरु कछुवा राख्दा जोडी भने राख्नु हुदैन । एउटा मात्र राख्नुपर्दछ ।
५.गोल्डेन फिस फेंगसुईका उल्लेख गरिए अनुसार घरमा गोल्डेन फिस राखेमा सौभाग्य, धनसम्पतीm मान सम्मान वृद्धि हुनेछ । यसलाई बेडरुम, भान्सा वा बाथरुममा भने राख्नु हुदैन्, सदैभरी यसलाई ड्राइङ रुममा राख्नुपर्दछ ।
६.पवन घन्टी पवन घन्टी घरमा राख्नाले विन्ड ताइन्सबाट निस्कने धुनले पुरै घरमा शान्त र सकारात्मक उर्जालाई वृद्धि बनाउनको कुरा चिनियाँ वास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । पवन घन्टीलाई हावा आइरहने ठाउँमा राख्नुपर्दछ ।
श्रीमानले तपाईंलाई वास्तै गर्दैन । आकर्षित गर्न के गर्ने त ? पूरा पढ्नुहोस्
फिल्म निर्माता निधिले लकडाउनमा गरिन् आफ्नै ४२ लिटर दुध दान : कसले लिए निधिको दुध ?
December 9, 2020 admin रोचक 2420
काठमाडौं। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर यो सत्य हो । जुन अनौठो मानव सेवाका लागि गरिएको कर्म भएकाले सम्मानका साथ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौ । पछिल्ला दिनहरुमा ४२ वर्षीय फिल्म निर्माता निधि परमार हीरानन्दानी खबरमा छिन
नुहाउनेबित्तिकै नगर्नुहोस् यी गल्ती, कपालको झरा कमजोर हुँदै जाला
February 8, 2021 admin रोचक 2387
काठमाडौँ । दिनभर आफुले गर्ने कामहरुको बारेमा ध्यान नदिँदा नै कपाल झर्ने र टुक्रिने समस्या हुने गर्छ ।त्यति मात्र हैन् कपालको स्यहार गर्ने क्रममा थोरै गल्ती गर्दा पनि कतिपय केटा मानिसहरुको त तालो नै खुइलिन्छ
December 21, 2020 admin रोचक 3784
काठमाडौँ । हामिले धेरै खानेकुराहरु एकैसाथ मिसाएर खाने गर्छौ । किनकी कुनै चिजहरु स्कसाथ मिसाएर खाँदा स्वादिष्ट हुन्छ । तर यस्ता चिज पनि हुन्छ जुन एक आपसमा मिसाएर खानुहुदैन । मिसाएर खाएमा स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्या